भाँडा माझ्दा बढ्छ सृजनशीलता ! | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि भाँडा माझ्दा बढ्छ सृजनशीलता !
र यो पनि0views
भाँडा माझ्दा बढ्छ सृजनशीलता !
हामीहरूमध्ये धेरैलाई भाँडा माझ्न निकै अल्छी लाग्छ । कतिपयले बाध्यताका कारण भाँडाकुँडा मस्काउने र धुने काम गर्छौं । हामीहरूले अल्छी मानेर गर्ने यही कामले नै हाम्रो सृजनशीलता र रचनात्मक क्षमता बढाउँछ भन्ने के तपाईंहरूलाई थाहा छ ?
भाँडा माझ्दा तनाव कम हुनुका साथै यसले रचनात्मक क्षमता पनि बढाउँछ भनेर विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । सन् २०१५ मा फ्लोरिडा स्टेट युनिभर्सिटीले गरेको एक अध्ययनमा भाँडा माझ्दा यससँग सम्बन्धित सानातिना क्रियाकलापमा बढी ध्यान दिने विद्यार्थीहरूको तनावको स्तर घटेको र प्रेरणामा समेत वृद्धि भएको पाइएको थियो ।
भाँडा पखाल्दा चिसो/तातो पानीको छालामा स्पर्श महसूस गर्न ध्यान लगाउने विद्यार्थीमा सकारात्मक ऊर्जा भेटिएको थियो । साबुनको गन्धले पनि रचनात्मकता बढाउन प्रेरित गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यस्तै, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाले गरेको अध्ययनमा पनि धेरै सोचविचार आवश्यक नपर्ने कामहरू गर्दा मस्तिष्कले विचरण गर्न पाउने र रचनात्मक उपाय तथा समस्या समाधान गर्ने देखाएको थियो । फोन डाइरेक्टरीबाट नम्बर कपी गर्ने जस्ता बोरिङ काम गरेपछि मानिसहरू झन् रचनात्मक भएर सोच्न सकेको युनिभर्सिटी अफ सेण्ट्रल लान्क्याशायरको अध्ययनमा पाइएको थियो ।
हुन त जेफ बेजोस र बिल गेट्सजस्ता विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तित्वले पनि आफूले खाएको भाँडा आफैं माझ्छन् भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यो साँचो हो । बेजोसले त आफूलाई भाँडा माझ्ने काम निकै ‘सेक्सी’ लाग्ने पनि बताएका थिए । उता, ८९ अर्ब डलर नेटवर्थ भएका बिल गेट्सले पनि हरेक रात आफूले परिवारका सदस्यले खाएको जुठो भाँडा रमाईरमाई माझ्ने गरेको बताउँछन् । एजेन्सी